Ihe mgbakwasa microneedle nwere ike nweta njikwa ọnya nwere ọgụgụ isi - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd., Ltd.
Ihe mgbakwasa microneedle nwere ike nweta njikwa ọnya nwere ọgụgụ isi
Mmebi akpụkpọ ahụ bụ ihe a na -apụghị izere ezere, na ọnya kpatara ọrịa na-adịghị ala ala na-achọkarị mgbake ogologo oge. Ịgwọ ọnya na -adịghị ala ala nwere ike ibute nnukwu nsogbu dịka ọrịa nje na ọbara ọgbụgba. Mgbe ejiji ọnya ọdịnala (mmanụ gauze na hydrogel, wdg) a na -eji agwọ ọnyá na -adịghị ala ala, enwere ụfọdụ ọghọm dị ka mwepụta ọgwụ enweghị ike ịchịkwa, adhesion na anụ ọnya na otu ọrụ. Maka idozi nsogbu ndị a, emewo nnyocha banyere akwa ọnya nwere ọtụtụ ọrụ na mwepụta ọgwụ nchịkwa. N'etiti ha, microneedle (Nnwom) patch na -egosi nnukwu ike n'iwu akwa akwa nwere ọtụtụ ọrụ maka njikwa ọnya nwere ọgụgụ isi. Patch MN nwere ike banye n'ime akpụkpọ ahụ na -erutaghị akwara na arịa ọbara, na -eme ka nchịkwa nchịkwa dị ntakịrị. Na mgbakwunye, enwere ike nweta mwepụta ọgwụ na-achịkwa site na iji ihe na-eme mkpali iji tinye mkpụrụ ndụ ọgwụ n'ime agịga.
Eserese eserese nke ejiji microneedle shark maka njikwa ọnya nwere ọgụgụ isi
Site na nhazi nke ezé shark, otu sitere na Mahadum Nkà na ụzụ nke Nanjing kọọrọ microneedle patch maka njikwa ọnya nwere ọgụgụ isi. Edepụtasịrị akwa MN nwere ọwa nwere ụkpụrụ site na polydimethylsiloxane na -adịghị mma nke laser (PDMS) ebu. Ọdịdị bionic na-enyere patch microneedle aka ịrapagidesi ike n'oge mgbake nke ọnya na-adịghị ala ala.. Enwere ike rụọ usoro nnyefe ọgwụ na-achịkwa na patch microneedle site na iji usoro enyere n'iwu na hydrogel na-anabata ọnọdụ okpomọkụ.. Ọwa microfluidic nke nwere microneedle n'usoro na ihe owuwu enyere iwu na -enyere aka nyochaa ọtụtụ ihe mkpali na patch microneedle.. Na mgbakwunye, Ejiri igwe eletrọnịkị MXene na microneedle patch maka nleba anya mmegharị ahụ dị nro.
Nkwadebe patch MN nwere ụkpụrụ ezé shark
N-isopropylacrylamide nke na-anabata okpomọkụ (NIPAM) ejiri hydrogel wuo usoro nnyefe ọgwụ nwere ọgụgụ isi na patch MN. Ewepụtara ihe owuwu IO PC dị n'elu microneedle iji kwalite ikike ịchekwa ọgwụ. Mgbe ọrịa mere, ọnọdụ okpomọkụ dị na mpaghara ọnya nwere ike ịdị elu 39.4 ° C. Mmụba okpomọkụ na mpaghara ọnya na-eme ka NIPAM hydrogel na-anabata okpomọkụ wee daa, na -ewepụta ọgwụ ịgwọ ọrịa encapsulated. Na mgbakwunye, patches MN multifunctional chọrọ nnukwu njikọta nke ngwa ọrụ dị iche iche (microneedles, ọwa microfluidic, na electrodes) banye n'uju zuru oke. Ndị nyocha ahụ chepụtara patch MN nwere akụkụ abụọ site na iji usoro mpịachi dị mfe, nwere otu akụkụ nwere microneedles ọgwụ juru na ọwa microfluidic maka ọgwụgwọ ọgwụ na nyocha biochemical, na akụkụ nke ọzọ nke nwere electrode na -agbanwe maka ịmata ngagharị.
Microfluidics na njikọta elektrọnik maka patch MN
Iji nyochaa ike nyocha biochemical nke mgbakwasa MN, A nyochachara lactate na calprotectin dị na nlele site na iji mgbakwasa MN. A na -egosi mkpokọta nke ndị na -ahụ maka ihe ọkụkụ site na oke ọkụ nke mpaghara nchọpụta. Ike fluorescence nke lactic acid nwere njikọta n'usoro yana oke ịta ahụhụ sitere 0 to 350 mmol/l. A na -ejikọ ike fluorescence na itinye uche nke calprotectin site na ahịrị 0 to 300 mg/ka Nsonaazụ ndị a na -egosi na akwa MN nwere ike nyocha biochemical. Iji nye MN mgbakwasa ikike nke ngagharị, A na -ejikọ sekit dabeere na MXene na mgbakwasa. A na -etinye akwa ahụ na mkpịsị aka ndị ọrụ afọ ofufo, nkwojiaka, ikiaka na ikpere, mgbe ahụ gbagọrọ agbagọ n'akụkụ dị iche iche wee dekọọ mgbanwe kwekọrọ na nguzogide. Nsonaazụ gosiri na mgbakwasa MN nwere nnukwu mmetụta nke nghọta ngagharị. Iji nyochaa ike uwe MN iji kwalite mgbake ọnya, Ejikọtara akwa MN ejiri mee nnwale anụmanụ na ihe na -etolite epidermal mmadụ (hEGF). Nsonaazụ gosiri na mgbakwasa MN nwere hEGF gosipụtara ikike mgbake ka mma.
Ngwa nke MN mgbakwasa na nyocha nke mmiri
Ngwa nke MN mgbakwasa na nghọta ngagharị
Ngwa nke MN mgbakwasa na ọgwụgwọ ọnya na -adịghị ala ala
E bipụtara nsonaazụ nyocha metụtara ya na ACS Nano n'okpuru aha "Ejiji Microneedle sitere n'ike mmụọ nsọ maka njikwa ọnya nwere ọgụgụ isi".
Ihe mepụtara na-emetụta ọmarịcha oghere mesh cage nanofiber airgel nwere mmetụta nje